Home / समाचार / ज्यानमारा रुख ! यसबाट टाढै रहनु बेस् एक सेयर गरि सबैलाई जानकारी गराउ।
ज्यानमारा रुख ! यसबाट टाढै रहनु बेस् एक सेयर गरि सबैलाई जानकारी गराउ। 0
प्रकृतिको हरियाली सबैलाई प्यारो लाग्छ । अझ गर्मीमा हरियो रुखको छहारीमा बस्न कसलाई मन लाग्दैन र ? तर केही रुख यति खतरनाक हुन्छन्, जसको छेउछाउमा पुग्नु पनि मानिसका लागि मृत्युको कारण बन्न सक्छ ।
केकीको निर्माणमा चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ को को छन नायक – नायिका ! ( फोटो / भिडियो सहित)